नेपालगञ्ज विमानस्थलको निर्माणकार्य तीव्र, अन्तरराष्ट्रिय मापदण्डमा पुग्न अझै दुई दशक लाग्ने
पुस २९, बाँके । गुरुयोजनाअनुसार नेपालगञ्ज विमानस्थलको निर्माणकार्य तीव्र पारिएको छ । राँझा विमानस्थलबाट विमान उडान शुरु भएको चार दशकपछि गुरुयोजना अन्तर्गत सुधारको काम भइरहेको हो । विसं २०१७ मा खजुरामा स्थापना गरिएको विमानस्थललाई विसं २०३० मा राँझामा स्थानान्तरण गरिएको थियो । जग्गा अधि...
मासिदै झिमरुक फाँट, अव्यवस्थित सहरीकरणले जोखिम बढ्दै
पुस २९, प्यूठान । प्यूठानको खेतीयोग्य जमीनलाई आवासीय रुपमा प्रयोग गर्ने क्रम बढ्दै गएको छ । केहि वर्ष यतादेखि खेतीयोग्य जमीन आवासीय रुपमा प्रयोग हुँदा प्यूठान जिल्लाको खाद्यान्न उत्पादनको आधा हिस्सा ओगट्ने झिमरुक फाँट घरहरुले भरिन थालेको छ । कम खेतीयोग्य जमीनमा आवास र धेरै उब्जनी हुने जमीनमा खे...
प्यूठानमा रोकिएन सरकारी सवारी दुरुपयोग
प्यूठान (अस) । सामान्यतः सरकारी सवारीसाधन कार्यालय समय र प्रयोजनभन्दा अन्य काममा प्रयोग गर्न पाइँदैन । बिदाको दिन तथा अत्यावश्यक कामका लागि सवारी चलाउनु परेमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट अनिवार्य अनुमति लिनुपर्ने प्रावधान छ । तर, प्यूूठानका सरकारी कार्यालय तथा स्थानीय तहका सवारीसाधन भने अनुमत...
पर्यटन सूचना केन्द्र ४ वर्षदेखि बन्द
रूकुम (अस) । रूकुम पश्चिमको सदरमुकाम मुसीकोट खंलगामा रहेको पर्यटन सूचना केन्द्र करीब ४ वर्षदेखि बन्द रहेको छ । पर्यटकीय क्षेत्रको सूचना संकलन गर्ने, प्रचारप्रसार गरी आन्तरिक तथा बा≈य पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएको केन्द्र आर्थिक अभावले ४ वर्षदेखि बन्द भएको पर्यटन सूचना केन्द...
अटो रिक्साको मनोमानी, ४ किलोमिटरको भाडा ५० रुपैयाँ !
पुस २८, रुपन्देही । चार किलोमिटर पक्की सडकको अटो रिक्सा भाडा कति होला ? धेरैजसोलाई लाग्न सक्छ–भाडा २०/ २५ रुपैयाँ । तर यो अनुमान तिलोत्तमा नगरपालिकाको सन्दर्भमा गलत छ । मणिग्राम–शिवपुर चल्ने अटो रिक्साले चार किलोमिटर पक्की सडकको भाडा प्रतियात्रु रू.५० असुल्दै आएका छन् । अटो रिक्...
गरीब पहिचानका लागि दाङमा रू. ३ करोड बजेट
दाङ । नेपाल सरकारले सञ्चालन गरेको गरीब पहिचान तथा परिचय वितरण कार्यक्रम यस वर्षदेखि दाङमा पनि शुरू भएको छ । कार्यक्रमको लागि सरकारले रू. ३ करोड २१ लाख ४२ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । जिल्लाका १० औटै स्थानीय तहमा रहेका गरीब परिवारको पहिचान गरी तिनलाई परिचयपत्र वितरण गर्न शुरु गरिएको...
दाङ (अस) । दाङमा पहिलोपटक व्यवसायिक रूपमा मेवाखेती शुरू गरिएको छ । करीब २५ वर्ष विदेश बसेर फर्किएका बहादुरसिंह बुढामगर र ओमबहादुर ओलीले घोराही उपमहानगरपालिका–५, वसन्तपुरमा मेवाखेती शुरू गरेका हुन् । यसको खेतीका लागि उनीहरूले १० कठ्ठा जग्गा लिजमा लिएका छन् । रोजगारीको क्रममा २५ वर्ष भारतमा...
तुषारो र झरीले कृषिबालीमा क्षति
रूपन्देही । रूपन्देहीलगायत तराईका जिल्लामा परेको तुसारो र बेमौसमी वर्षाले कृषिबालीमा क्षति पुर्‍याएको छ । निरन्तरको वर्षा र तुषारोले विशेष गरी तरकारी खेती र कालो तोरीखेतीमा असर पारेको किसानहरूले बताएका छन् । निरन्तरको वर्षाले आलु, गोलभेँडामा कुहिने समस्या देखिएको तिलोत्तमा–१४, रगर...
प्यूठानका १५ आयोजनाका लागि रू. १३ करोड अनुदान
प्यूठान । राष्ट्रिय योजना आयोगले चालू आर्थिक वर्षमा प्यूठानका १५ आयोजनालाई रू. १२ करोड ६६ लाख विशेष अनुदान प्रदान गरेको छ । समपूरक र विशेष अनुदानबापत प्राप्त उक्त रकम जिल्लाका ९ ओटै स्थानीय तहले सञ्चालन गरेका पर्यटन, खानेपानी, विकास निर्माण लगायत आयोजनालाई समावेशी रूपमा विनियोजित गरिएको प्रदेश...
प्रतिकिलो ८०० मूल्य रहेको किवी खेती गर्न पाल्पाका कृषक आकर्षित
पुस २६, पाल्पा । पाल्पाको हावापानीमा किवी खेतीको सफल परीक्षणपछि यस खेतीतर्फ किसानको आकर्षण बढेको छ । पहाडी जिल्ला पाल्पामा पहिलोपटक परीक्षणका रूपमा किवी खेती खरिएको हो । परीक्षणकै लागि रोपिएको किवीले प्रशस्त फलसँगै आम्दानीसमेत बढेपछि किसान यसको व्यावसायिक खेतीतर्फ लम्किन खोजेका छन् । पूर्...